ဇာဂနာအကြောင်း အကုန်ဖွင့်ချမည် ~ Myanmar Express
From : ယုဇနကို Thura Awng ရေ... ဇာဂနာ့အကြောင်းအစုံနီးနီး ရနေပါပြီ။ သူက ဒီကိစ္စအားလုံး ဖုံးလို့ဖိလို့ ရမယ်ထင်နေတာ။ သူတို့ဖုံးဖို့ဖိဖို့ ကောလင်းဒေးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တိတ်တဆိတ် လုပ်လိုက်မှပဲ အန်တီ့ဆီကို သတင်းတွေ အပြည့်ဝင်နေပါတယ်။ မကြာခင် မြန်မာပြည်မှာ သူတို့အားလုံးအကြောင်း စာအုပ်တအုပ်တောင်ထုတ်နိုင်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။ အထောက်အထား ပိုမို ပြည့်စုံအောင် အသံဖိုင်တွေပါစုဆောင်းနေပါတယ်။ (၄င်းတို့နှင့် အစည်းအဝေးတိုင်းကို တက်ခဲ့ဖူးသူတွေ မယုဆီကို အဲဒီ့ အသံဖိုင်လေးတွေ ပို့ပေးပါနော်။ ရှိသင့်သလောက်တော့ ရှိနေပါပြီ။ လူမှန်တွေကို သူတို့ ထပ်စော်ကားနေရင် နောင်လာနောက်သားတွေ သိရအောင် မယု ရာဇဝင် စာအုပ်ထုတ်ပါ့မယ်။ အခုလဲ ပေးပို့နေသူတွေကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဂါရဝပြု ပြောကြားပါရစေ။ တိုင်းပြည်ကို သစ္စာဖေါက် လောက်ကောင်တွေလက်ထဲမေ၇ာက်သွားအောင် ကာကွယ်ခြင်းသည် မင်္ဂလာပါ။ ဟန်ဆောင်မှုဟာ ကြာရှည် မခံတတ်ပါ။ ဗူးပေါ်သလိုပေါ်တတ်ပါတယ်။ သူတို့၎ယောက်စလုံး ကုလားဒိန်တွေ အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုပြီး ဝမ်းသာနေခဲ့တဲ့ပွဲဟာ(အထူးသဖြင့် ကိုအောင်-၈၈ ဆိုပြီး) ၈၈ နာမည်အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဖျက်စီးနေသူ အောင်ကျော်စိုး ဆိုသူဟာ ၈၈တုံးကလဲ ဘာမှ မြန်မာပြည်အတွက် မယ်မယ်ရရ လုပ်ခဲ့သူ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ယခုလည်း ယူကေတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးပျိုများကို အေဆိုင်လမ် တင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံယူ၊ အကယ်၍ ပိုက်ဆံမပေးပါက လူကိုပါ အပိုင်သိမ်းနေခဲ့တာ နှစ်ပရိစ္ဆေရ ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုမျှသာမက ဘင်္ဂလီအရေးကို ဘားမားကမ်ပိန်း(ယူကေ) နှင့်ပေါင်းကာ သိသိသာသာ လှုပ်ရှားနေသူဖြစ်ကြောင်း ဓါတ်ပုံများနှင့်တကွ သက်သေတွေ ရှိနေပါပြီ။ တိုင်းပြည်ထဲက ရိုးသားသူများ သိထားမှ တော်ကာကျမှာဖြစ်လို့ မယုတို့ ရာဇဝင်တခု စာတင်ပြမှာပါ။ လင်းတတောက်တော့ ငှက်တိုင်းလှပါတယ်။ သူတို့လည်တယ်ဆိုတာ တချို့အိပ်နေသလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ကိုသူရ(ခ)ဇာဂနာ၊ ဗစ်ကီိဘိုးမန်း၏ယောက်ျားပန်းချီ ထိန်လင်း၊ဦးဝင်းနိုင်(အန်လယ်ဒီ-အယ်အေ-ယူကေဥက္ကဌ)၊ ကိုအောင်(၈၈)တို့၏ ပူးပေါင်းလုပ်ကြံမှုhttp://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_9151.html ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လန်ဒန်မှာ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာကြောင့် ဇာဂနာ နဲ့ ထိန်လင်းတို့ ကို ပြည်သူအများ စိတ်ပျက် http://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_5715.html လန်ဒန်မှာ ဘာပွဲလုပ်လုပ် မပါတော့.. ဟု ဇာဂနာ ပြောဆို http://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_7509.htmlယူကေမှ ဘုန်းကြီးများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရေးပေါ်တောင်းပန်http://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_2927.htmlပြဿနာ အကြီးကြီးတက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပခရီးhttp://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_3486.htmlယူကေတွင် ပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်မှ နောက်ဆက်တွဲ များhttp://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_6007.htmlလန်ဒန်မှာ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ ပြဿနာတက်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်http://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_9065.htmlမပါသေးတာကတော့( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မွတ်ဆလင် ဘာသာပြောင်းခိုင်းတဲ့ UK ရောက် မြန်မာများ http://www.myanmarexpress.net/2012/06/uk.html ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအများ စိတ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပ ခရီးစဉ် http://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_3211.html ဒေါ်စု လန်ဒန်တွင် ရုံသွင်းခံရခြင်း http://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_6206.html )ဥရောပရောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ရိုဟင်ဂျာ ကို မြန်မာတိုင်းရင်းသား အသိအမှတ်ပြုရေး လှုပ်ရှားသူများကို တွေ့ဆုံ အားပေးhttp://www.myanmarexpress.net/2012/06/blog-post_9420.html Myanmar Express
All Rakhine and Myanmar people against 88 Myanmar Muslim traitors.
စောက်ရူးဇာဂနာ ဘာသာပြောင်းချင်လဲ မြန်မြန်ပြောင်း ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့ လူရှေ့ခေါ်ပြီး မစော်ကားနဲ့
ဒီကောင်က ကွန်မြူနစ်ဘဲ၊ ဘာသာရေးဘယ်ရှိမလဲ။ ဒီ ကောင့်မိဘတွေလည်း ကွန်မြူနစ်တွေဘဲ။။
2 July 2012 20:36
http://www.facebook.com/insultmo ဖာခေါင်းကြိးအလာအကြောင်းအကုန်ပါတဲ့ဆိုက်ပါ ဆောက်ကုလားသေချင်းဆိုးနဲ့သေပါစေ
ma ae loo zargnar.. nay yar taing hmar ahmar look nay ber lah..di kaung gdone,,ko [poliotical science ko thit lah lo may like per.. daw su,, longyi nar hmar kat sar nay de dog or khwe kaung bar..
3 December 2012 03:17
All of ME members are "HNABU". I will send you some toys for your pleasure if you post your address.
၇ှိ၇ှိသမျှသော ပြည်ပအစိုး၇အဖွဲ့ အစည်းတွေကို လိမ်ညာစားနေတဲ့ ကောင်။ စောက်၇ှက်လည်းမ၇ှိပါဘူးဗျာ။ မိသားစုကို အမေ၇ိကန်နိုင်ငံပို့ ထားပြီး အခွင့် အေ၇းအပြည့်ယူနေတဲ့ သူတောင်းစားအကြီးစား။ အမေ၇ိကန်သံ၇ုံးကစာေ၇းတွေဖြစ်တဲ့ထင်အောင်ကျော်နဲ့သူ့ တပည့်အာသာအေးတို့ ဆို နှစ်ပြားမတန်အောင်ပြောနေကြ။ အမေ၇ိကန်အစိုးဆီကို ဟို ၈၈အဖွဲ့ နဲ့အပြိုင် လိမ်ပြီး ပ၇ိုပိုဆယ်တွေတင်ပြီး ၇ိုက်စားနေတာ။ ဒီသူတောင်းစားကွာ။